သံဖြူသေတ္တာများလက်ကားသည်သံဖြူသေတ္တာကိုသေချာစေရန်လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခုကိုပြောပြသည်
နေအိမ် / သတင်း / Custom Tin Boxes လက်ကားများသည်သံဖြူကိုမည်သို့လုံခြုံစေသနည်း။
Custom Tin Boxes လက်ကားများသည်သံဖြူကိုမည်သို့လုံခြုံစေသနည်း။
အကောင်းဆုံးသောအစားအစာထုပ်ပိုးမှုပုံစံကိုတည်ဆောက်ရန်ဤစီမံကိန်းအမျိုးအစား၏ပြောင်းလဲမှုများကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ ၎င်း၏ ဦး တည်ရာ၊ ရှုထောင့်နှင့်အသုံးချလုပ်ဆောင်နိုင်မှုများသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များဖြစ်သည်။ သင်သည်မည်သည့် စိတ်ကြိုက်သံဖြူသေတ္တာလက်ကား ကုမ္ပဏီ .
အစားအစာအမျိုးအစားတစ်ခုစီသည်သိုလှောင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးကွက်အတွင်းရရှိနိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုသင်သတိပြုရမည်။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးမှုကဘာလဲဆိုတာသင်စဉ်းစားမိရင်၊ ဒီ post ကိုအဆုံးအထိဖတ်ပါ။
The current ထုံးစံအတိုင်းသံဖြူသေတ္တာများလက်ကား market increasingly seeks sustainable alternatives and the possibility to recycle and reuse resources. Packaging production also adopts this aspect and seeks to develop container solutions for the conservation and transport of food.
Ensuring food conservation is one of the main challenges for ထုံးစံအတိုင်းသံဖြူသေတ္တာများလက်ကား companies operating in the food segment. This reality is even more apparent in restaurants and fast-food restaurants. Especially which deal with the delivery of meals and offer the grab and go option.
ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်ဖန်ထည်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုလက်မှုပညာကဲ့သို့သောအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ စိတ်ကြိုက်သံဖြူသေတ္တာလက်ကား။
2. လူမီနီယမ်ထုပ်ပိုး: ထုံးစံသံဖြူသေတ္တာများလက္ကား
၄ င်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးတာရှည်ခံသည်။ အလူမီနီယမ်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ရှည်လျားသောအကွာအဝေးသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအစားအစာများကိုထုပ်ပိုးရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုစူပါမားကတ်စင်များပေါ်တွင်ကာလရှည်ကြာပြသခဲ့သည်။
Custom tin boxes wholesale ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့သည်ဖောက်သည်ဖောက်တံဖြင့်ဖွင့်ရန်လိုသည်ကိုရှောင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်ဆုံးစားသုံးသူသည်ဤကိရိယာကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့မှာတံဆိပ်တုံးရှိတယ်၊
အစားအစာပို့ခြင်းထုပ်ပိုးခြင်းအတွက်အလူမီနီယမ်သည်အားသာချက်များစွာမရှိပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့်ယိုစိမ့်မှုသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာအလူမီနီယမ်သည်ပုံနှိပ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အမြင်အာရုံလက္ခဏာကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
It is worth mentioning that, although they are resistant, measures must be applied to avoid their exposure to impacts. Either during storage or during transportation. A crushed can representsahealth risk. If you contactaprofessional စိတ်ကြိုက်သံဖြူသေတ္တာလက်ကားcompany, you may not face these issues.
It is not very common to see Styrofoam packaging in the products we find in supermarkets. But they are widely used in industry, especially for storing and transporting fresh food, such as fish or frozen pasta. They are also quite common in food delivery ထုံးစံအတိုင်းသံဖြူသေတ္တာများလက်ကား.
ဤ ထုံးစံအတိုင်းသံဖြူသေတ္တာများလက်ကား၎င်းသည်နေရာများစွာမယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကဖြုတ်, နှင့်ပြား၏ပုံစံ၌သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်အခါ။
စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သောအစားအစာများကိုသိုလှောင်ထားပြီး၎င်းသည်လုံးဝသီးခြားစီဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှအနံ့သို့မဟုတ်အနံ့အမျိုးအစားများကိုအစားအစာထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင်နို့နှင့်ဖျော်ရည်ကဲ့သို့သောအစားအစာအမျိုးအစားများကိုအအေးခံရန်မလိုအပ်ပါ။
Prev: ၂၀၂၀ တွင်တန်ဖိုးနည်းလက်ဆောင် Tin Box ပေးသွင်းသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာများ
နောက်တစ်ခု - လက်ဆောင်သေတ္တာပေးသွင်းသူများ - လက်ဆောင်ထုပ်ခြင်း၏သိပ္ပံ